Sabtida Go'aanka Maxkamada Sare. Qore Mukhtar Cilmi
Saturday January 15, 2022 - 10:01:50 in Articles by Hadhwanaag News
Guddoomiyaha maxkamada sare mudane aadan xaaji cali aad iyo aad baan u salaamaya iyo dhamaan garsoorka somaliland iyo saaxaafada. Inta ka bacdi waxaan u sheegaya gudoomiyaha hadaanu nahay shacabka somaliland ee sugaya go'aankiina xeer 14 waxaan idin farayna in xeerkaasu ku dhaqan galo sidaa oo waxa la gaadhay 10 sanadood ee dib loo furi lahaa ururada , 2002 iyo 2012 iyo maanta oo ah 2022 ,10 sano kaste waa2la furaya cidna lama baryayo waayo waa dastuuri.
Mudane ku dhawaaq oo wajiga kaga saydhi kuwa hadh iyo habeen ku waayay adiga iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dawlada somaliland kuna hanjabiya dagaal sokeeye.
Maanta ha arkaan in dalku yahay dal le ciidaan ilaaliya, garsoor kala haga, shuruuc iyo xeerer u yaala, cidna u joojin mayno dad nolosha ka dhacay oo calyada la hor istaaga warbaahiinta, dalkan waa lagu soo tabcay ragii kadidooda u soo cabay aya haya taladiisa, bal aan aragno cida xiniyaha leg ee dhaqaaqda bal!..